IKhomishini yaseYurophu ihlawulisa uGoogle ngenani elirekhodiweyo lama-2420 ezigidi zeerandi | Iindaba zeGajethi
Uphando Idla ngokuba ziindaba phantse yonke imihla, kwaye ngeentsuku ezithile njenganamhlanje zezinto ezingathandekiyo, ngakumbi kwi-giant search. Kwaye kunjalo IKhomishini yaseYurophu imhlawulisile ngembali engekho nto kwaye ingaphantsi kwe-2420 yezigidigidi zeerandi. Isizathu kungenxa yokusetyenziswa gwenxa kwesikhundla esiphambili kunye nenjini yokukhangela.
Ingcaciso ethe kratya, kungenxa yenkonzo uGoogle ayibonelelayo ngenkonzo yokuthelekisa, eyaziwa njenge Google Shopping, apho kunikwa khona inzuzo engekho mthethweni kukhangelo olwenziwe ngoKhangelo lukaGoogle. Ngamanye amagama, i-injini yokukhangela ibeke ngokungafanelekanga ezinye zeemveliso zayo ngaphezu kwezo zikhuphisana nazo.
Ngamazwi e UMargrethe Vestager, UMkomishinala Wokhuphiswano waseYurophu; “UGoogle uvelise iimveliso ezininzi kunye neenkonzo ezitshintshe ubomi bethu Ilungile lonto. Isicwangciso-qhinga sikaGoogle sothelekiso lwenkonzo yokuthenga sasingekuko nje ngokutsala abathengi ngokwenza ezabo iimveliso zibengcono kunezo zaso. Endaweni yoko, uGoogle usebenzise gwenxa indawo yakhe ephambili kwintengiso njengenjini yokukhangela ukukhuthaza inkonzo yokuthelekisa yokuthenga kwiziphumo zokukhangela kunye nokwenzakalisa abo bakhuphisana nabo. Into eyenziwe nguGoogle ayikho semthethweni.
Ukuqala namhlanje UGoogle uneentsuku ezingama-90 zokuyeka lo mkhuba kwaye alungise zonke iimpazamo ezenziwe. Ngaphandle koko unokubeka emngciphekweni isohlwayo esitsha esinokufikelela kwi-5% yengeniso yemihla ngemihla ye Alphabet, Inkampani yabazali yesigebenga sokukhangela.
Kuya kufuneka silinde ukubona ukuba eli tyala litshintsha njani kwaye ukuba uGoogle ugqibela ngokuhlawula udibanisa esona sohlwayo sikhulu sakha sabekwa yiKhomishini yaseYurophu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IKhomishini yaseYurophu ihlawulisa uGoogle ngenani elirekhodiweyo lama-2420 ezigidi zeerandi
I-Instagram iyakusivumela ukuba sinciphise inani labantu esinokwabelana nabo ngemifanekiso